Khilaaf ka dhex billowday Maamulka Tv-ga Dowladda & Madaxtooyada Somalia - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Khilaaf ka dhex billowday Maamulka Tv-ga Dowladda & Madaxtooyada Somalia
Khilafkaan ayaa waxaa uu salka ku hayaa kadib markii Khudbadii xalay ee Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee arrinta badda la soo geliyay xilli dambe Tv-ga Dowladda.
Maamulka Tv-ga Dowladda ayaa sheegay in Khudbadda Madaxweyne Farmaajo xilli dambe loo soo diray sidaasna ay ku geliyeen, waxaana kasii horreeyay qoraal uu Bartiisa Faceook soo dhigay Agaasimaha warfaafinta ee Madaxtooyada Cabdirashiid Xaashi, isaga oo sheegay in Khudbadda Madaxweynaha laga daawan karo Tv-ga Universal.
Maamulka Tv-ga Warbaahinta dowladda ayaa Maanta soo saaray qoraal lagu cadeeynayo in Khudbaddii Madaxweynaha ee xalay soo gaartay goor dambe, isla markii ay soo gaartayna soo geliyeen TV-ga.
Dhowr jeer oo hore ayaa qoraalo kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha mudo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan lagu baahinta Tv-ga Qaranka,kuwaas oo ku socday Ra’iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roooble.
Khilaafka ka dhex billowday Maamulka Tv-ga Dowladda & Madaxtooyada Somalia ayaa waxaa uu salka ku hayaa khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha mudo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Ra’iisul Wasaare Rooble, kaas oo ka dhashay kiiska maqnaanshaha Ikraan Tahliil.